Hawlgabka Kelyaha - Somali Women's Lifestyle
The site created by and for Somali Women – Hawa Gamble 2015-19
Hawlgabka kelyaha (kidney failure) oo Ingiriisiga loogu yaqaano “renal failure.” Marka kelyuhu hawlgabaan, jirka kama saari karaan dheecaanka dheeraadka ah iyo qashinka. Waxay tani dhici kartaa sababta oo ah cudur ama waxyeelo ka timi dhaawac.
Waxay saaraan biyaha siyaadada ah iyo qashinka
Waxay dheelitiraan dheecaanada iyo kiimikooyinka jirku u baahan yahay
Waxay xukumaan cadaadiska dhiigga
Waxay xukumaan dheecaanada jirka (hormones) ee sameeya unugyo dhiig oo cusub
Kelyuhu waxay biyaha siyaadada ah iyo qashinka ka saaraan dhiigga oo u bedelaan kaadi. Ka dibna kaadida ayaa laga saaraa jirka. Dadka badidoodu waxay leeyihiin 2 kelyood. Qofku waxa uu nolol caafimaad leh ku noolaan karaa isaga oo leh hal keli.
Waxa jira 2 nooc oo ah hawlgab kelyo oo loo yaqaano mid daran (acute) iyo mid soo-jireen ah (chronic).
Hawlgabka Kelyaha ee Daran
Hawlgabka kelyaha ee daran waa kelyaha oo si kadis ah u lumiya hawl qabadkooda oo dhacda saacado ama maalmo gudahood. Sababaha waxa ka mid ah:
Waxyeelo ama joogsi ku dhaca dhiigga ku qulqula kelyaha
Dawooyinka qaarkood, iyo khamri ama isticmaalka maandooriye ama daroogo
Joogsi ku dhaca marinka kaadida
Badanaa kelyuhu way soo fiicnaan karaan marka sababta keentay dhibaatada la helo ee la daweeyo. Waxa laga yaabaa in loo baahdo sifeynta kaadida si qashinka looga saaro jidhka ilaa kelyuhu ka shaqeeyaan.
Hawlgabka Kelyaha ee Soo-jireenka ah
Hawlgabka kelyaha ee soo-jireenka ahi waxa uu dhacaa marka kelyuhu si tartiib ah u lumiyaan shaqadooda. Waa cudur nolosha qofka oo dhan jira oo aan laga fiicnaan. Sababaha waxa ka mid noqon kara:
Cudurada sida sonkorta/sokorowga, cadaadiska dhiigga ee sareeya iyo cudurka wadnaha
Gufeysan ama dhibaatooyin ku dhaca marinka kaadida
Lubus (lupus), oo ah cudur isdifaac jir
Scleroderma, oo ah cudur maqaarka iyo seedaha
Caabuqa soo-jireenka ah
Dawooyinka qaarkood oo loo qaato xanuuno kale mudo, iyo khamriga ama isticmaal-xumida maandooriye
Calaamadaha Hawlgabka Kelyaha ee Soo-jireenka ah waxa ka mid ah:
Barar ah jidhka, sida gacmaha, wajiga ama cagaha
Isbeddelo ah inta jeer ee aad kaadisid
Dareen ah daal badan ama tabar-dari
Madax xanuun iyo wareer
Lallabo ama matag
Rabitaanka cuntada oo luma
Dareen ah neefsashada oo dhib kugu ah
Maqaarka oo cuncuna
Hawlgabka kelyaha ee soo-jireenka ah ma laga bogsado. Waxa lagu daweeyaa cuntada oo la beddelo iyo dawooyin. Marka kelyaha uu ka lumo badi hawlgalkoodu, taasoo la yidhaahdo dhamaadka hawlgabka kelyaha (end-stage renal failure), kaadi-saaris (dialysis) ayaa loo baahan yahay dhawr maalmood tobobaadkii. Waxa kale oo doorasho daweyn noqon kara in kelyo lagugu talaalo.
La hadal dhakhtarkaaga ama kalkaalisada haddii aad qabtid su’aalo ama walaac.